BLOG 16: DIY OVERNIGHT OATS – JOAMAR-JOHN
Do you always want to eatahealthy breakfast but can’t think of what to eat? Well, here is my secret: an overnight oats.
(ဘော်ဒါတွေအားလုံး ကျန်းမာစေတဲ့မနက်စာကို စားချင်ပေမယ့်လည်း ဘယ်လိုအစားအသောက်ကို စားရမလဲဆိုတာ မသိဘူးဖြစ်နေကြလား။ ကောင်းပြီလေ။ ဒီမှာ ကျနော့်ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက် overnight oats)
Before I share the ingredients and steps on how to make it I’ll be sharing the benefits of this breakfast. You’ll be able to feel fuller and burn more fat, you will also avoid poor food choice, you will absorb more nutients and you will be able to double the health of your heart.
(ဘာတွေပါဝင်လဲ၊ ဘယ်လို အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာ မပြောခင် ဒီမနက်စာက ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး တွေကို ကျနော် အရင်ဆုံး ပြောပြပေးပါ့မယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ဗိုက်ကို ပြည့်ဝစေနိုင်မယ်၊ အဆီတွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်မယ်။ အစာအသောက်ဆင်းဆင်းဆင်းရဲရဲနေစရာမလိုတော့ဘူး။ နောက်ပြီး အဟာရကိုလည်း ပိုမိုရရှိနိုင်မယ်။ နှလုံးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး နှစ်ဆရနိုင်မယ်။)
Anyways here’s the step by step procedure.
(ကဲ အဆင့်ဆင့် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦး။ )
Don’t forget to tag me on your DIY overnight oats okay?
(ကဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ DIY လေး လုပ်ပြီးရင်တော့ ကျနော်ကို Tag လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။)
Tagged: diy, foodreview, foods, healthy, healthyliving, joamarjohn, livinghealthy, oats, other, others